Ụbọchị My Pet » Ọ Online dịwara N'ihi losers?
Ọ Online dịwara N'ihi losers?
emelitere ikpeazụ: Ka. 29 2020 | 2 min agụ
E nwere ntiwapụ aga na taa ngwangwa paced mmadụ — anyị na-niile na-efu onye ọ bụla ọzọ na anyị otú ahụ dị mkpa ná ndụ ma bụ n'ezie ndị na-enweghị ike jikọọ inwe ịhụnanya. Gịnị mere ndị dị mfe ụbọchị ụlọ akwụkwọ sekọndrị mgbe anyị nwere iti ụmụ okorobịa anya nke anyị na ruo:)?
Ọfọn, nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ ebe ọtụtụ n'ime ndị ụmụ okorobịa lụrụ, kpaliri mba ọzọ, mpụ, ma ọ bụ ghọtara na ha bụ ndị nwoke nwere mmasị nwoke — otú ahụ search maka Mr. Right ihe siri ike karịa mgbe ọ bụla. The ọdọ mmiri nke oruru bachelors na-na-slimmer quicker karịa anyị mgbe-wee me oge bombs.
Na ihe ndị a akasiakde ị na ihu – dịtụla mgbe ị na-ewere na-agbalị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? Ọ bụ a mara mma ụzọ dị mfe iji n'ike n'ike dịkwuo size nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọdọ mmiri na ole na ole clicks nke a òké.
Ugbu a, m mara ihe ị na-eche echiche. Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị olu olileanya. Ikpeazụ resotu. Loserville! Ma, anaghị m na-eche otú. Na ihe mere bụ n'ihi online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere abịa a ogologo ụzọ.
Ọ bụ agaghịkwa a nzuzo online forum n'ihi ụyọkọ ndị ụgha na di na nwunye ndị mmadụ na-ahụ unsuspecting nwanyị na-eri anụ na. Emela – ugbu a mgbe nile, -arụ ọrụ, -enwe nkụda mmụọ kpọrọ na-achọ ịhụnanya online na-achọta ihe ịga nke ọma. N'afọ ndụ nile. n'agbụrụ niile. okpukpe nile. E nwere onye na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ n'ihi na onye ọ bụla! Ya mere, e nwere n'ezie ọ dịghị ihe mere na-enye agbalịrị.
Nanị ole na ole iwu ka jirichaa gị ahụmahụ…
1. Dị nnọọ n'ihi na ị na-ahụ na onye ị na-dakọtara na online apụtaghị na ị maara na ha ma. Emeso ọ bụla na niile ọhụrụ online mmekọrịta na-elezi anya na ezi uche.
2. Ekwe onwe gị na-agbalị a jiri obi. Ọ bụrụ na ị na-eche oké njọ banyere ihe ị na-eme, ọ ga-abịa gafee mgbe ị na-ezute mmadụ. Nweta uche gị nri:)
3. Gwa onye ị na nso ihe ị na-eme ma karịsịa ma ọ bụrụ na i online ahụmahụ offline. Ekwela ka nke ahụ imenye gị ụjọ – ma ka ọ bụla ụbọchị – kpachara anya.
4. Mgbe unu zutere Mr. Right – ga-esi na-anọghị n'ịntanetị! Unu sabotaji gị onwe gị site amaghị mgbe ezu bụ ezuru ma na-na n'elu isi gị.